वरिष्ठ नागरिक मोबाइल र ईन्टरनेट उपयोग तथ्य, तथ्याures्क, र तथ्याistics्क | Martech Zone
इन्फोग्राफिक: वरिष्ठ नागरिक मोबाइल र इन्टरनेट उपयोग तथ्या .्क
मंगलवार, जुलाई 30, 2019 मंगलवार, जुलाई 30, 2019 निकोला जोर्डजेभिक
बुढेसकालले प्रयोग गर्न सक्दैन, बुझ्दैन, वा अनलाइन समय खर्च गर्न चाहँदैन भन्ने स्टेरियोटाइप हाम्रो समाजमा व्यापक छ। यद्यपि यो तथ्यमा आधारित छ? यो सत्य हो कि सहस्राब्दीहरूले इन्टरनेटको प्रयोगमाथि प्रभुत्व जमाउँछन्, तर के त्यहाँ वास्तवमै केहि बेबी बुमर विश्वव्यापी वेबमा छन्?
हामी त्यस्तो सोच्दैनौं र हामी यो प्रमाणित गर्न गइरहेका छौं। पुराना व्यक्तिहरू आजकल बढ्दो संख्यामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै र प्रयोग गर्दैछन्। उनीहरूले कसरी ल्यापटप, स्मार्टफोनहरू, र ड्याब कसरी भर्चुअल वास्तविकतामा प्रयोग गर्ने सिक्ने फाइदाहरू महसुस गरिरहेका छन्।
यहाँ केहि तथ्यहरु छन् जुन तपाईलाई आजको समाजमा पुरानो पुस्ताले कसरी इन्टरनेटको प्रयोगको वास्तविकता देखाउँछन्।
कति र कति
इन्टरनेटमा वरिष्ठको संख्या वास्तवमा धेरै बढी छ। अर्थात्, कम्तिमा %०% 70 65 बर्ष उमेरका व्यक्तिले दैनिक आधारमा केही समय अनलाइन खर्च गर्छन्।
औसतमा, पुरानो पुस्ताले प्रति हप्ता लगभग २ hours घण्टा अनलाइन खर्च गर्दछ।
Medalerthelp.org, एल्डरली र वर्ल्ड वाइड वेब
यसबाहेक, वरिष्ठहरूले इन्टरनेटको ठूलो फाइदा बुझेका छन् - असीमित जानकारीको नि: शुल्क पहुँच! त्यसकारण, अनुसन्धानले कम से कम देखाउँदछ %२% वरिष्ठ खोज इन्जिनहरू प्रयोग गर्छन् उनीहरूको चासोको शीर्षकहरूमा जानकारी फेला पार्न।
अधिकांश वरिष्ठ मौसम जाँच गर्नुहोस्
किन वृद्धहरू अनलाइन छन् भन्ने मुख्य कारणहरू मध्ये एक मौसम जाँच गर्नु हो (करीव check around%)। यो एक परिचित तथ्य हो कि जति पुरानो तपाईं अधिक संवेदनशील हुनुहुनेछ मौसमको मौसममा अचानक परिवर्तनहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसैले यसलाई अनलाइन जाँच गर्नु राम्रो तरिका हो तयार रहन।
यद्यपि, वृद्ध मानिसहरूले अन्य चीजहरूको पनि होस्टको लागि इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। केहि सब भन्दा साधारण व्यक्तिले किनमेल, खानाको बारेमा जानकारी, खेलहरू, कूपन र छुट, र अन्य धेरै कारणहरू समावेश गर्दछ।
ईन्टरनेट मार्फत वृद्ध संचार गर्नुहोस्?
हामी वरपरका ठूला व्यक्तिहरू बारे हामीसँग अर्को स्टीरियोटाइप यो हो कि तिनीहरू अझै आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग कुराकानी गर्न ल्याण्डलाइनमा भर पर्छन्। जबकि केहि को लागी यो सत्य हो, यो केहि व्यापक सोच्ने को रूप मा व्यापक छैन।
ईन्टरनेटमा सञ्चारका तीन मुख्य साधनहरू हुन् ईमेल, सन्देश अनुप्रयोगहरू, र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू। करीव% 75% उमेरका व्यक्तिहरूले कम्तिमा एउटा सन्देश अनुप्रयोग प्रयोग गरेर उनीहरूको परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चार गर्छन्। दुई सबैभन्दा सामान्य व्यक्तिहरू फेसटाइम र स्काइप हुन् किनकि यी भिडियोसँग कुराकानी गर्न र छविहरू पठाउन धेरै सजिलो गर्दछ।
कुन उपकरणहरू अधिक प्रयोग गरिन्छ?
जे होस् हामीले वृद्ध र टेक्नोलोजीलाई एकसाथ ल्याउन लामो यात्रा गरिसकेका छौं, अझै सुधारको लागि अझै ठाउँ छ। उदाहरणको लागि, नियमित सेल फोनहरू स्मार्टफोनको तुलनामा पुरानो पुस्ताको बीच अझै सामान्य छ। तपाईको उमेर मापन जति मा जानु छ, सेल फोन र स्मार्टफोन को उपयोग बीच ठूलो दूरी हुन्छ।
उदाहरणको लागि,---people aged वर्षका of%% मानिसहरूले सेल फोन प्रयोग गर्छन्, जबकि%% %ले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दछ। यद्यपि 58०% माथिका मध्ये% 80% ले सेल फोन प्रयोग गर्दछ, तर केवल १% %ले स्मार्टफोन प्रयोग गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि स्मार्टफोनहरू अझै पनि बुढाका लागि डराइरहेका छन्, तर यी प्रवृत्तिहरू पक्कै पनि चाँडै नै परिवर्तन हुनेछ।
यी संख्याहरू भविष्यमा बढ्ने आशा गरिन्छ
इन्टरनेट र बुजुर्गसँग सम्बन्धित नम्बरहरू पहिले नै धेरै उत्साहजनक छन्। यद्यपि निकट भविष्यमा तिनीहरू चाँडो बढ्ने आशा गरिन्छ। आधुनिक टेक्नोलोजीको राम्रो कमान्ड भएका युवा पुस्ताहरू बढ्दै जाँदा टेक्नोलोजीले साक्षर भएका सीनियरहरूको प्रतिशत पनि बढ्नेछ।
यस विषयमा अझ अन्तर्दृष्टिको लागि, निम्न द्वारा डिजाइन गरिएको इन्फोग्राफिक जाँच गर्नुहोस् मेडलेरथेलप.
टैग: इन्टरनेट प्रयोगमोबाइल फोन तथ्या .्कमोबाइल प्रयोगवरिष्ठ नागरिक
निकोला जोर्डजेभिक, MD, सामग्रीको प्रमुख MedAlertHelp.org। सर्बियाबाट आएका, निकोला मेडिसिनका डाक्टर हुन् जसले २०१ project मा यस प्रोजेक्टको शुरुवात गर्नुभई अरुलाई, विशेष गरी बुजुर्गहरुलाई सहयोग गर्ने चाहनाबाट। चिकित्सा सचेत प्रणालीको समीक्षाको अलावा, उनले स्वास्थ्य, बुढेसकाल, अवकाश र अन्य वरिष्ठ सम्बन्धित विषयहरूमा समर्पित ब्लग पनि लेख्छन्।
तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग रणनीति निर्माणको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
फिग्मा: डिजाईन, प्रोटोटाइप, र सहयोग मार्फत उद्यम